कसरी ब्लूबेरी को compote तयार?
खाद्य र पेय पदार्थ, पेय पदार्थ
ब्लूबेरी - बेरी, यसको लागि जानिन्छ लाभदायक गुणहरू। यसलाई - दृष्टि समस्या को मामला मा पहिलो सहायता, मधुमेह संग बिरामी भएकाहरूलाई को ठूलो परिमाणमा लागि आवश्यकता हो, जो प्रकृति को उपहार आनन्द ती लागि भिटामिन को एक veritable खजाना trove छ। तपाईंले उपलब्ध सबै प्रकारका मा जाडो को लागि शेयर गर्न निश्चित हुनुहोस्। जामुन को compote गर्न सजिलो तरिका हो।
छिटो खाना पेय
ब्लूबेरी एक compote कुनै विशेष तयारी र श्रम-गहन गतिविधिहरु आवश्यक छ। जामुन ध्यान reassemble, खराब, crumpled, नपाकेको हटाउन छन्। राम्रो धुन। आफ्नो क्षमता करिब आधा पोख्नुहोस्। सिरप उम्लिरहेको पोख्नुहोस् -, कभर र आगोमा 10 मिनेट (गणना घटक प्रति पानी लीटर ब्लूबेरी एक compote मा चीनी को 750-800 ग्राम आवश्यक)। त्यसपछि, ध्यान पट र reboil मा तरल खन्याउन। फेरि, सिरप संग गर्मी देखि पैन हटाउने बिना आफ्नो बैंकहरू घाँटी को किनारा मा, भर्न त्यसपछि रोल अप आवरण र उल्टो कन्टेनर बारी। कवर, घण्टा लागि यो स्थिति छोड्नुहोस्। कि पछि, एक कोठरी वा तहखाने मा ब्लूबेरी को compote हटाउन। पकाउने यस प्रकारको तपाईं जामुन को सबै उपयोगी गुणहरू संरक्षण गर्न अनुमति दिन्छ।
यो पेय अर्को तरिकामा लागि तयार गरिएको छ। जामुन एक तामचीनी पट मा खन्याउन छुट्टाछुट्टै तयार सिरप भर्न चढाई द्वारा धोए (4 किलो चिनी को 1.5 किलो र पानी लगभग4लिटर जामुन)। खाली-एक किसिमको ऐसेलु compote जोश, कभर गर्न आगो राख्नु, र बिहान सम्म (7-8 घण्टा) छोड्नुहोस्। त्यसपछि, यो जामुन हटाउन एक जार तिनीहरूलाई फैलियो। सिरप फेरि जोश र फेरि ट्यांक मा खन्याउन। - 30, र तीन-लीटर - 35 मिनेट 20 मिनेट, दुई-लीटर लागि लीटर जार: तपाईं निम्न आवश्यक उत्पादन जीवाणुरहित। यदि सिरप भर्नु पर्याप्त छैन जब, तपाईं उसिनेर पानी थप्न सक्नुहुन्छ। compote एक किसिमको ऐसेलु मा तरल पोख्नुहोस् हुन पनि डिब्बे को घाँटी माथिल्लो किनारा तल2औंलाहरु। उम्लिरहेको पछि, माथि कभर रोल र उत्पादनहरु शांत राखे। यदि बैंकहरू जामुन लागि बाहेक, राख्नु छन् बाटो गरेर, पेय, सुगन्धित हुनेछ, पत्रदल एक चिया को उठ्नुभयो। यो compotes साँच्चै bewitching गन्ध दिन्छ।
घरेलू तयारी को एक उत्कृष्ट विकल्प सधैं फरक कटौती गरिएको छ - तरकारी र फल। अन्य डिब्बाबंद खाना उनलाई विजेता थप वैविध्यपूर्ण र धनी स्वाद, aromas, भिटामिन को उच्च सामग्री र यति मा। डी तपाईं ती फल प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध को एक नुस्खा एक किसिमको ऐसेलु compote आमन्त्रित गरिन्छ किनभने एक सुखद मिश्रण छ। यो स्याउ durum छ भने, तिनीहरूले स्लाइस वा चौथाई मा कटौती र केही मिनेट लागि पानी उम्लिरहेको मा ड्रप गर्न आवश्यक छ। नाशपाती र स्लाइस मा कटौती। यदि प्लम, खुबानी, आडू - हड्डी आधा (चौथाई) मा फल विभाजन हटाउनुहोस्। करौदा, विशेष गरी हरियो, poprokalyvayte को जामुन। compote कसरी खाना पकाउनु ब्लूबेरी निर्धारण "मिश्रित" को? तयार बैंकहरुलाई, उत्पादनहरु भर्न - तहहरू वा मिश्रित या त। भराई अन्यथा स्वाद पनि तेज हुनेछ, आधा भन्दा अलिकति कम हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईं रोल अप बैंकहरू शीर्षमा सिरप उम्लिरहेको खन्याउन र तुरुन्तै गर्न आवश्यक छ। को उल्टो र पूर्ण शांत एक बिदा र्याप अप। पक्कै मा भने, कि क्यान्ड अडान, 10-15 मिनेट को लागि जार जीवाणु रहित बनाउनु। बैंक त्यहाँ हावा आउटलेट लागि ठाउँ छ भनेर मात्र त सिरप खन्याउन।
सुन्दर गर्मी स्वाद र स्वाद एक आनन्द लिनुहोस्!
"फलाम बनाउँने" - स्कटल्याण्ड देखि एक घाम चिसो पेय
के ताजा दूध सबैभन्दा उपयोगी?
Milkshake नुस्खा: मिश्रण सबै भन्दा स्वादिष्ट
कसरी Calvados सही पिउन
प्रयोग को tequila प्रेमीहरूको के पिउन?
कोको पाउडर देखि कोका कसरी खाना पकाउनु। कोको पाउडर को एक ग्लेज कसरी बनाउने
लेजर उपचार बिना पीडा र दुर्व्यवहार
पीठो sifting लागि छनौट कस्तो हुनुपर्छ?
कसरी आफ्नो हात संग विवाह चश्मा बनाउन - केही फरक तरिका
कसरी चरणमा पेन्सिल मा एक एल्फ आकर्षित गर्न?
घर मा प्रजनन minks
होटल "Pushkin", मास्को: समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
सुगा पंख किन बाहिर गिर छ? यस्तो अवस्थामा के गर्ने?
कसरी आफ्नै हातले ओवन मा स्नान स्थापना गर्न
VTB 24, अन्य बैंकबाट ऋण पुन: पुन: प्राप्त गर्ने: नियम र सर्तहरू
ककडी र अन्डा को एक सलाद कसरी तयार
एलसीडी "वन कुना", Khimki: समीक्षा र फोटो